अचानक जमिन फाट्यो,महिला जमिनमुनी भासिइन्अनि धुँवा आउन थाल्यो………..! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अचानक जमिन फाट्यो,महिला जमिनमुनी भासिइन्अनि धुँवा आउन थाल्यो………..!
अचानक जमिन फाट्यो,महिला जमिनमुनी भासिइन्अनि धुँवा आउन थाल्यो………..!
“एक जना महिला बिहानै शौचका लागि बाहिर जाँदै थिइन् । अचानक उनले टेकेको जमिन फाट्यो । ति महिला त्यो जमिनमुनी भासिइन् । ति महिलाले”आफुलाई बचाउन निकै कोशिष गरिन्, देखेकाहरुले पनि डोरी दिएर उनलाई उद्दार गर्ने कोशिष गरे । तर उनी त्यसैमा बिलाइन् । उनी भासिएको जमिनवाट अचानक धुँवा आउन थाल्यो ।
गाउँलेकै अगाडी यस्तो चमत्कारीक रुपमा महिलाको निधन भएपछि भारतको” झारखंडको धनबादमा त्रा स फैलिएको छ । महिला शुक्रबार बिहान शौचको लागि बाहिर निस्केकी थिइन् । यसैबीच, बाटोमा, अचानक उसको खुट्टाको जमिन ठूलो आवाज गर्दै फाट्यो र ऊनी भित्र पसीन् ।
यो झारिया क्षेत्रको”बस्तरकोलाको घटना हो, शुक्रबार बिहान ३५ वर्षीया महिला कल्याणी देवी शौचालयमा जाँदै थिइन्, जब मैदान अचानक फुटेर त्यस महिला भित्र पसीन्। यसपछि त्यहाँबाट धुवाँ आउन थाल्यो। यो धुवाँ वि षा लु ग्यासका कारण बाहिर आयो
घटनास्थलमा मानिसहरू”जम्मा भए र महिलालाई डोरीको सहयोगमा उनलाई बाहिर निकाल्ने धेरै प्रयत्न गरे तर तिनीहरू त्यसमा सफल हुन सकेनन्। अचानक जमिन भित्रबाट ठूलो मात्रामा ग्याँस आउन थाल्यो ।
घटनापछि स्थानीयले सडक”अवरुद्ध गरे र घटनास्थलमा तत्काल राहत कार्यको माग गरे। प्रहरी आएपछि पनि ति महिलालाई बाहिर निकालियो । तर महिलाको निधन भइसकेको थियो । एजेन्सी
स्वर कोकिला लताको मुम्बईमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि
भक्तपुरमा दश बर्षदेखि अधकल्चो १७ तले भवनको भित्री कथा